“ယောင်္ကျားတို့ ဘုန်းလက်ရုံး၊ မိန်းမတို့ ဘုန်းဆံထုံး” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားကို မသိနားမလည်ခင် အရွယ်ကတည်းက ဆံပင်ရှည်ရှည်တွေကို ကျွန်မက နှစ်သက်တတ်ခဲ့တာ ခုထိမှတ်မိနေသေးတယ်…။ ကျွန်မ ၂တန်း၊ ၃တန်း အရွယ် “က” တမ်း၊ “ခုန်” တမ်း ကစားကြပြီဆို မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြီးကို ခေါင်းမှာအုပ်ပြီး ဆံပင်အရှည်ကြီးလုပ်ခဲ့တာ…။ အဲဒီတုန်းက အမေ့ဆံပင်တွေက ခြေသလုံးထိရှည်သေးတယ်…။ အမေများ ခေါင်းဖြီးနေပြီဆို ကျွန်မက အမေ့နံဘေးနေရင်း အမေဆံပင်တွေကို ကိုင်ကိုင်ကြည့်လို့အားကျနေခဲ့တာ…။ အမေတို့တက္ကသိုလ်တက်တုန်းက အမေ့ဆံပင်တွေက ခြေမျက်စိထိရှည်တယ်လို့အမေပြန်ပြောတော့ ကျွန်မတက္ကသိုလ်တက်ရင် အဲဒီလောက် ဆံပင်ရှည်ကြီးနဲ့ဖြစ်ချင်မိခဲ့ပြန်တယ်…။ ရှစ်တန်းလောက် အပျိုပေါက်အရွယ်ရောက်တော့ ကျောင်းမှာ တချို့သူငယ်ချင်းတွေ ဆံပင်အရှည်လေးတွေ ဖြစ်လာတော့ နဂိုကဆံပင်ရှည်ထားချင်တဲ့စိတ်တွေ ထိန်းမနိုင်ဖြစ်ပြီး အဖေ့ကို ပူဆာမိခဲ့တယ်…။ အဖေက အပျိုကြီးစိတ်ဖြစ်မှာစိုးလို့အချိန်တန်ရင် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ရောက်တော့ စန္ဒာပုံပါပဲ...။ တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ရောက်တဲ့အထိ အဖေခွင့်မပြုလို့ယောင်္ကျားဆန်ဆန် ဆံပင်တိုတိုနဲ့ တက်ခဲ့ရတယ်…။
ကျွန်မတို့တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ ဆံပင်အရှည်တွေအရမ်းခေတ်စားတဲ့ခေတ်…။ မင်းသမီး ဇင်မာဦး… တင်နီလာဝင်း… လင်းဇာနည်ဇော်… စိုးမြတ်သူဇာ… သူတို့ အကုန်ဆံပင်ရှည်လေးတွေနဲ့အလွန်လှကြတာ…။ တက္ကသိုလ်က သူငယ်ချင်းမိန်းကလေး တော်တော်များများကလဲ ဆံပင်ရှည်လေးတွေ တ၀ဲဝဲနဲ့ ….။ ခေတ်စားတဲ့ သီချင်းတွေကလဲ “ညနေခင်းရဲ့လေပြေထဲမှာ…. မင်းဆံနွယ်တွေ တောင်ပံခတ်လို့ နေ” တို့ …. “ဆံပင်ရှည်ရှည်အရပ်မြင့်မြင့် ကိုယ့်ချစ်သူလေး..” တို့ …. “ဆံပင်ရှည်ရှည် ကောင်မလေးများတွေ့ ရင် ယောင်ရမ်းပြီးရပ်ကြည့်နေမိတယ်”…. တို့ နဲ့သီချင်းတော်တော်များများမှာ ဆံပင်ရှည်ရှည်ကောင်မလေးတွေက နေရာယူလို့ ထားပြန်တာ….။ ဒုတိယနှစ်ကျောင်းတွေပိတ်တော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ယောင်္ကျားဆံပင်နဲ့ ကျွန်မကို အဖေက သနားသွားပုံရတယ်…။ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် မခေါ်သွားတော့ ကျွန်မကလဲ တနေ့ ထက်တနေ့ရှည်လာတဲ့ဆံပင်လေးတွေကို တကိုင်ကိုင်နဲ့ပျော်လို့ လေ…။ ဆံပင်လေးတွေ ကုတ်ထောက်တဲ့ အရှည်ရောက်တော့ ကုတ်ထောက်ရင် အရှည်မမြန်တတ်ဘူးဆိုလို့စည်းထားလိုက် ခေါက်တင်လိုက်နဲ့အလုပ်တွေကိ်ု ရှုပ်လို့ ….။ ညအိပ်ရင် ကျစ်ဆံမြီးကျစ်အိပ်ရင် ဆံပင်အရှည်မြန်တယ်ဆိုလို့ကျစ်ဆံမြီးကျစ်အိပ်လား အိပ်ရဲ့…။ ကျောင်း၃နှစ်ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်တော့ ကျွန်မဆံပင်လေးတွေ ကုတ်ကျော်ပြီး ဆံပင်အရှည် စာရင်းဝင်လာခဲ့ပြီလေ…။ အိမ်ကကြီးကြီးကလဲ ကျွန်မဆံပင်လေးတွေကို ဆံထုံးလေးထုံးပေးလိုက်… ကျစ်ဆံမြီးလေးကျစ်ပေးလိုက်…. တ၀က်ခွဲစည်းပေးလိုက်နဲ့တနေ့ တမျိုး မရိုးရအောင် လုပ်ပေးတတ်ပါတယ်…။
အကြေကောက်တွေ…3steps4steps တွေ ခေတ်စားလာတဲ့အချိန်ကျ အဖေ့ဆီက အရင်ကလို စန္ဒာပုံအစား “ယောင်္ကျားတို့ ဘုန်းလက်ရုံး၊ မိန်းမတို့ ဘုန်း ဆံထုံး” ဆိုတဲ့ စကားတဖွဖွကြားရတတ်ပါတယ်…။ တနေ့ တခြားရှည်လာတဲ့ ကျွန်မဆံပင်ကို ဖြတ်ပစ်မှာ အဖေစိုးရိမ်လာပြီး စာမေးပွဲနားနီးလို့ဆံပင်နဲနဲတိရင်တောင် အဖေမသိအောက် တိတ်တိတ်လေး တိရတဲ့အထိပါပဲ…။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလဲ ဆံပင်ရှည်တွေ မြတ်နိုးတာမို့ကျွန်မဆံပင်ရှည်တွေကို ဖြတ်ပစ်ဖို့ ဆိုတာ နဲနဲလေးမှမစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး…။ ထက်ထက်မိုးဦးဆံပင်ရှည်လေးနဲ့ကြော်ငြာတွေ ရှမ်းရှမ်းတောက် အောက်မြင်နေတဲ့အချိန်ကျ ဆံပင်ရှည်တွေပြန်ခေတ်စားပြန်တယ်…။ ကျွန်မကတော့ တခြားဆံပင်ပုံဘယ်လိုမှ လုပ်မရတဲ့ ဖြောင့်လွန်းတဲ့ဆံပင်တွေကြောင့် ရှေ့ ကဆာမူရိုင်းနဲ့နောက်အရှည်ကြီးကို မူပိုင်ထားခဲ့တာပါ…။ ကျွန်မနဲ့အဲဒီဆံပင်ကို လူတွေတွဲမှတ်မိတဲ့အထိပါပဲ…။ ဆံပင်တွေကို ဘယ်လောက် ရူးသွပ်သလဲဆို ဆံပင်ပျက်စီးမှာစိုးလို့မလျှော်ခင် အုန်းဆီမှန်မှန်လိမ်းပြီး သဘာဝတရော်၊ ကင်မွန်းခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ သာ လျှော်ခဲ့ပါတယ်…။ ဆံသားတွေ ပျက်စီးမှာစိုးလို့သိပ်တောင် မစီးဖြစ်ပဲ ဘယ်လောက်အိုက်အိုက် ဒီတိုင်းချထားတတ်ပါတယ်…။ ကျွန်မကြီးကြီးကိုယ်တိုင် စိတ်ရှည်လက်ရှည် လုပ်ပေးတဲ့ လဘက်ပုပ်၊ ထောလပတ်ရွက် နဲ့ အုန်းဆီ ရောစပ်ထားတဲ့ ဆံပင်လိမ်းဆေးကိုလဲ ပုံမှန်လိမ်းရင်း ကျွန်မဆံပင်ရှည်တွေကို အတော်ဂရုစိုက်ခဲ့ပါတယ်…။ ဒီရောက်တော့ ဒီကရေကြောင့်ရယ် အချိန်မရသဘာဝခေါင်းလျှော်ရေမရတော့ chemicalခေါင်းလျှော်ရေတွေ လျှော်တာကြောင့်ရယ် ကျွန်မဆံပင်တွေ အရင်ကလိုမဟုတ်ပဲ အရမ်းကျွတ်ပြီး ပိုပိုပါးလာခဲ့ပါတယ်…။ ဒါပေမယ့်လဲ ဆံပင်ရှည်မြတ်နိုးတဲ့ကျွန်မ ဆံပင်ရှည်တွေကို ဆက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်…။
ဆံပင်ရှည်တွေကို ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ ဖြတ်ရင်တောင် ကျော်လယ်လောက်ထိသာ ဖြတ်ပြီး အရှည်အတိုင်းထားခဲ့တာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ထိပါပဲ…။ သွေးအရမ်းအလှူချင်တဲ့ ကျွန်မ သွေးနီဥအားနည်းတတ်တာမို့ဆရာဝန်က သွေးမလှူခိုင်းပါဘူး...။ သွေးလှူဖို့အခွင့်မရခဲ့တာမို့ဆံပင်တွေကို ရွှေဆံပင်တံတားလမ်းအတွက် လှူလို့ ရတယ်ဆိုတာ သိရတော့ ကျွန်မတသက်လုံး မြတ်မြတ်နိုးနိုးထားတဲ့ ဆံပင်တွေကို လှူချင်တဲ့ သဒ္ဒါတရားပေါ်ခဲ့ပါတယ်…။ ဆံပင်ဖြတ်ဖို့ ဆို အမြဲတုန့် နှေးနေတတ်တဲ့ကျွန်မဆီမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လှူချင်တဲ့စိတ်ကို ကျွန်မကို ကျွန်မအံ့သြမိတဲ့အထိပါပဲ…။ ရွှေဆံပင်တံတားလမ်းဆိုတာကတော့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲလွန်းလို့(၁၀)မိုင်ဝေးတဲ့ အရပ်မှာရှိတဲ့ ဆေးရုံကို ၃နာရီလောက်ကြာအောင် သွားရလို့အသက်မဆုံးရှုံးသင့်ပဲ ဆုံးရှူံးသွားခဲ့ကြတဲ့ သူတွေကို မျက်မြင်တွေ့ ပြီး ဆရာတော်အရှင်ဝေပုလ္လက ဦးဆောင်ပြီး ပိုက်ဆံရှိသူရော မရှိသူပါလှူဒါန်းနိုင်တဲ့ ဆံပင်အလှူ( ဇိဝိတဒါနအလှူ) နဲ့လမ်းတွေ တံတားတွေခင်းခဲ့တာ အခုဆို အလောင်းတော်ကဿပပင်မလမ်း နဲ့တံတားပေါင်းများစွာ ခင်းနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်…။ ငွေလှူလိုက်လို့ရတာများ ဆံပင်ဘာလို့ လှူသလဲလို့ကျွန်မကို မေးခဲ့ရင်တော့ အထက်ကပြောသလို ကျွန်မမြတ်နိုးတဲ့ ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်က အစိတ်အပိုင်းကို လှူရတာမိုလို့ငွေထက်ပိုအဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ အလှူလို့ခံစားကြည်နူးမိလို့ လို့ဖြေရမှာပါပဲ…။
အမြဲကြောလယ်လောက်ထက်တိုအောင် မညှပ်တဲ့ကျွန်မ ဒီတခါတော့ ဆံပင်တွေကို တပေကျော်လှူလို့ရအောင် ကုတ်ကျော်ကျော်အထိ ညှပ်ပြီး လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်…။ ဆရာတော်ဆီမှာ ဆံပင်ကို လှူဒါန်းနေချိန်မှာ ဖြစ်တဲ့ပီတိက တခါမှမဖြစ်ဖူးတဲ့ တကယ့်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ပီတိပါ…။ မရှိလို့မလှူရဘူးဆိုသူများ ကျွန်မရဲ့ဒီပို့ စ်လေးဖတ်မိရင် ကိုယ့်ဆံပင်တွေကလဲ မြတ်သောအလှူတခုဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိသွားခဲ့ရင် ကျွန်မကျေနပ်မိမှာပါ…။ ဆံပင်လှူလိုသူများရှိရင် အောက်ပါ contact များမှတဆင့်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါရစေ…။
အရှေ့ ဝါယာလက် ၂ လမ်း၊ ကမ္ဘာအေး၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
ဖုန်း - ၀၉-၆၄၅၀၆၅၄၊ ၀၉-၂၅၆၁၉၈၀၉၁
ဆံပင်အလှူကတဆင့် လမ်းတံတားအလှူဖြစ်တာမို့လမ်းတံတားလှူဒါန်းရခြင်းကရတဲ့ အကျိုး ၅မျိုးကို ဝေမျှပါရစေနော်…။
Posted by တန်ခူး at 10:58 PM
သာဓု သာဓု သာဓု ပါမတန်ခူးရယ်..။
သြော်... ဒါကြောင့် မတန်ခူး ဆံပင်အတိုနဲ့ဖြစ်သွားတာကို စိတ်ထဲမှာ နဲနဲထူးဆန်းသလို ဖြစ်နေခဲ့တာ။ မရဲ့ ဆံပင်အလှူအတွက် သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်လိုက်တယ်နော်။း)
ဒါနဲ့လေ... ဇွန်ငယ်ငယ်ကလည်း ဆံပင်အရှည်ထားခဲ့သေးတယ်။ လသာ၂မှာတုန်းက ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ ကောင်မလေးတွေကို အမကြီးတွေ လိုက်တဲ့ခေတ်လည်း ရှိခဲ့သေးတယ်နော်။ ခုတော့ ဇွန်လည်း ဆံပင်အတိုနဲ့ ဖြစ်နေပါပြီ။ :D